The 48th ASEAN DAY Commemorating Ceremony was held at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The 48th ASEAN DAY Commemorating Ceremony was held at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw
The 48th ASEAN Day Commemorating Ceremony was held at the Ministry of Foreign Affairs, Building No. 9, Nay Pyi Taw, this morning.
The ceremony was attended by ministers and officials from government ministries, Hluttaw members, Heads/Representatives and spouses of the ASEAN embassies and representatives from civil societies.
The Ceremony was opened with the ASEAN Anthem sung by the artistes of the Ministry of Culture at 0900 a.m, followed by remarks made by U Wunna Maung Lwin, Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs; Dr. Kan Zaw, Union Minister for the Ministry of National Planning and Economic Development; U Aye Myint Kyu, Union Minister for the Ministry of Culture, and on behalf of the current ASEAN Chair, Mr. Mohd Haniff Bin Abd. Rahman, Ambassador of Malaysia. After that,ashort film on ASEAN and play-back performances on “ASEAN We are One” and “Friend to Friend, Hand to Hand” by students from the Ministry of Education and “Spirit of ASEAN” by the Ministry of Foreign Affairs were presented. The ceremony was concluded around 10:30 a.m.
ASEAN was established on 8th August 1967 and it has 10 member countries from Southeast Asia comprising Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. According to the ASEAN Charter and the ASEAN Community Building Roadmap, the ASEAN Community will be established by the end of 2015.
(၈-၈-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်ခဲ့သည့် (၄၈)နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို နေပြည်တော်ရှိ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၉)တွင် ယနေ့ နံနက်က ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ဝန်ကြီးဌာနများနှင်‌့ လွှတ်တော်တို့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အာဆီယံသံအမတ်ကြီးများ နှင့်ဇနီးများ၊ အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားကို နံနက်၀၉၀၀နာရီတွင် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊အနုပညာရှင်များမှ အာဆီယံ သီချင်းဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်း နှင်‌့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာကံဇော်၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်ကြူ နှင့် အာဆီယံဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် မလေးရှားနိုင်ငံ ကိုယ်စား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှား သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ မိုဟာမက် ဟာနစ် ဘင် အက်ဘ်ဒူ ရာမန် တို့မှ အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ် မိန့်ခွန်းများကို အသီးသီး ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် အာဆီယံအဖွဲ့အကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ကားကို ပြသကာ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများမှ “ASEAN We are One” နှင့် “Friend to Friend, Hand to Hand” နောက်ခံတေးသီချင်းများဖြင်‌့ သရုပ်ဖော်ကပြ ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများ မှ “Spirit of ASEAN” ဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်း အနားကို နံနက် ၁၀၃၀ နာရီခန့်တွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
အာဆီယံအသင်းကို (၈-၈-၁၉၆၇)ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အရှေ့တောင် အာရှ (၁၀)နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် ဘရူနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊လာအို၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊နှင်‌့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြပါသည်။ အာဆီယံပဋိညာဉ်စာတမ်း နှင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်းတည်ထောင်ရေး လမ်းပြမြေပုံတို့အရ အာဆီယံ အသိုက်အဝန်းသည် ၂၀၁၅ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်တွင် ပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်